Himalaya Dainik » क्रिकेटका यी ८ महिला एङ्करः जसकाअघि ‘फिका’ लाग्छन् बलिउड नायिका !
क्रिकेटका यी ८ महिला एङ्करः जसकाअघि ‘फिका’ लाग्छन् बलिउड नायिका !
बिश्वमा नायिकाहरूको भयंकर चर्चा हुन्छ । उनीहरू नै संसारमा सुन्दर हुन भन्ने मान्यता हुन्छ तर केहि यस्ता एंकर छन् जसको नायिकाको जस्तै चर्चा हुन्छ ।
नायिकालाइ समेत माथ खुवाउने उदघोषण गर्ने सुन्दरीको पनि निकै चर्चा हुनेगर्छ । क्रिकेटमा उदघोषण गरेर चर्चामा अाएका केहि सुन्दरीहरूबारे हामी चर्चा गर्दैछाैँ ।
उनि अभिनेत्रि संगै भारतनाट्यम कि डान्सर पनि हुन । अस्ट्रेलियामा भारतीय परिवारमा जन्मेकी पल्लविले बलिउड चलचचित्र माई नेम ईज खानमा अभिनय गरेकी छिन । सन २०१६ को आईपिएलमा एङ्करिङको भुमिकामा प्रस्तुत भएकी थिईन । आईपिएलमा उनको लुक्सले सबैको ध्यान आफ्नोतर्फ आर्कषित गरेकी थिईन । आईपिएल पछि उनको सुन्दरताको निकै चर्चा भयो ।
रोशेल मारिया राव
रोशेलले आईपिएलको छैठो सिजनमा एङ्करिङ गरेकी थिईन । रोशेलले सन २०१२ मा मिस ईन्डियाको उपाधि हातपार्दे चर्चित रियालटी शो बिगबसमा पनि सहभागिता जनाएकी छिन ।
ब्रिटीस अभिनेत्री करिश्मा एक सफल एङ्कर पनि हुन । उनले आईपिएलको छैठो सिजनमा एङ्करिङ गरेर चर्चामा आएकी थिईन । करिश्माले आफ्नो करियर मोडलिङबाट सुरुवात गर्दै किङफिसरको क्यालेन्डरमा पनि देखा परेकी थिईन ।
अमेरिकन टेलिभिजनमा एङ्करको रुपमा आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी थिईन । शिवानीले धेरैजसो टिभी सिरीजहरुमा पनि एङ्करको रुपमा काम गरेकी छन । उनको पनि सुन्दरताको निकै चर्चा हुनेगर्छ ।
नगरानीले सन २००६ मा च्याम्पियन ट्रफिको होस्ट गरेकी थिईन । उनी सन २००७, २००९ र २०१० को विश्वकपमा पनि थिईन । सोनाली बलिउड चलचित्र रब ने बनादि जोडी, दिल बोले हडिप्पामा पनि काम गरेकी छिन ।
पूर्व टेलिभिजन स्टार एवम भारतका पहिलो महिला क्रिकेट कमेन्टेटर मन्दिरा बेदीले दोस्रो सिजनको आईपिएलमा एङ्करिङ गरेको थिईन । उनले सन २००३ र २००७ क्रिकेट विश्वकप तथा २००४ र २००६ को च्याम्पियन ट्रफिमा एङ्करिङ गरेकी थिईन ।
अर्चानाले आईपिएलको चौंथो सिजनमा एङ्करिङ गरेकी थिईन । अर्चनाले ट्रवर डायरी फर एक्सट्रा कभर जस्ता क्रिकेट शो हरुमा होस्ट गरेकी छिन ।
भारतीय मुलकी ईङलिस क्रिकेटर ईसाले आईपिएलमा एङ्करिङ गरेकी छिन । ईङल्यान्डले सन २००९ मा महिला क्रिकेट विश्वकप जित्दा टिमका प्रमुख सदस्य थिईन । उनको पनि सुन्दरताको निकै चर्चा हुनेगर्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
पोखरामा थप दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
यी ५ समस्या भएका ब्यक्तीले भुलेरपनि नखानुस् अनार !
आज शुक्रबारको राशिफलः यी ४ राशीले विशेष सावधानी अपनाउनु
पोखरामा आफ्नै १३ वर्षीया छोरीलाई ‘करणी’ गरेको आरोपमा बाबु पक्राउ
पूर्व युवराज पारस शाहको स्वास्थ्यमा समस्या
राजसंस्था माग्दै पोखरामा जुलुसः गुन्जियो ‘श्रीमान गम्भीर नेपाली …
कक्षा १२ को परीक्षा, मोबाइल हेर्दै चिट चोरेको भिडियो भाइरल, परीक्षा रद्द हुन सक्ने ! (भिडियो)
मूर्ति चोरेको आरोपमा दिपक मनाङेकी श्रीमती पक्राउ
बर्दिबास प्रदर्शनमा प्रहरीको ‘गो ली’ लागेका युवकको मृत्यु
भोलि पोखरामा ३ हजार बाईक र २० हजारको सहभागितामा राजावादीको र्याली
६ बर्षिय बालिकालाई ‘मारेको’ आरोपमा ‘पक्राउ’ परेका व्यक्तिको घरमा आगजनी